Non asbestos gasket zvinhu fekitori - China isina asbestos gasket zvinhu vagadziri, vatengesi
QF3725 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
QF3712 Asiri-asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
QF3707 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
FBYS408 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
QF3710 Asiri asbestosi yakaderera tembiricha inodzivirira bhodhi
Yakagadzirwa neAramid fiber, kabhoni fiber, synthetic mineral fiber, mafuta uye yakaderera tembiricha inodzivirira kunamatira, ichiwedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, uye inoitwa nekuumburuka nzira.
Inokodzera mhando dzese dzemafuta, mvura, firiji, gasi rakawanda, uye zvimwe midhiya sekuvhara zvinhu.
Kunyanya inokurudzirwa yemhepo kutonhodza, compressors, ndiro yekupisa kupisa uye mamwe mafiriji masisitimu kana kubata anotonhorera masystem sekuvhara magaskets.
QF3736 Asiri-asbestosi yakadzika tembiricha inodzivirira sheet
Yakagadzirwa neAramid fiber, kabhoni fiber, synthetic mineral fiber, oiri inonamira inonamira, ichiwedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, uye inoitwa nekuumburuka nzira.
Inokodzera mhando dzese dzemafuta, gasi rakawanda, mvura uye zvimwe midhiya sekuvhara zvinhu.
Kunyanya inokurudzirwa kune general indasitiri sekuvhara liner zvinhu.
Yakagadzirwa neAramid fiber, kabhoni faibha, girazi faibha, oiri inonamira inonamira, ichiwedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, uye inoitwa nekuumburuka nzira.
Kunyorera kune zvinwiwa zvakaita semhando dzakasiyana dzemafuta, mweya, mvura, mhute, nezvimwe.
Inoshandiswa se gasket remota, midhudhudhu, michina, peturu-kemisitiri, nezvimwe.
QF3716 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
Yakagadzirwa neAramid fiber, cellulose fiber, synthetic mineral fiber, oiri isingabatidzi namira, ichiwedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, uye inoitwa nekuumburuka nzira.
Inogona kushandiswa maererano nemafuta, gasi rakawanda, mvura, mhute, nezvimwe.
Inoshandiswa se gasket yeinjini yemukati yemoto, pombi flange, midziyo yekumanikidza, nezvimwe.
Yakagadzirwa neAramid fiber, synthetic mineral fiber, oiri inonamira inonamira, ichiwedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, uye inoitwa nekuumburuka nzira.
Inonyanya kukurudzirwa se gasket zvinhu zvemidziyo yegungwa.
Inogona kushandiswa maererano nemafuta, gasi rakawanda, mvura, nezvimwe.
Inoshandiswa kune injini, pombi yemafuta, pombi yemvura, ese marudzi emuchina, pombi flange sekuvhara liner zvinhu.
Inonyanya kukurudzirwa kuti ishandiswe sekuvhara gasket kune yakazara chinangwa muchina uye ese marudzi emapombi.
QF3700 Asiri-asbestosi yakadzika tembiricha inodzivirira sheet
FBYS411 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
Ne graphite powder, Kevlar fiber uye yakakosha kunamatira yakakosha machisi, wedzera inoenderana inoshanda zvinowedzera, kushandiswa kwekuteedzera zviri pamutemo system
Neye tembiricha-inoshingirira kunamatira, asibesitosi-isina kupisa-isingasviki fiber uye inormeric yepamusoro-tembiricha inozadza mushandirapamwe, wedzera inoenderana makemikari ekuwedzera, kushandiswa kwekuteedzera zviri pamutemo system.
FBYS411 fiber-yakasimbiswa graphite graphite munyori ndiro
FBYS268 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
Aramid faibha, kabhoni faibha, fiberglass, nezvimwewo semapfupa zvinhu, oiri-isingabatiri namira yakakosha kudyidzana, wedzera inoenderana chemakemikari zvinowedzera, mafiringi, kushandiswa kwe roller roller zvemutemo system.
FBYS402 Asiri asbestosi yekuisa mucherechedzo pepa
Ne butyl latex, asbestos-isina mafaera uye anoshanda mafirita akakosha mushandira pamwe, wedzera inoenderana makemikari ekuwedzera, iko kushandiswa kwekuteedzera zviri pamutemo system.